Nhau - Ungachinje Sei Thermal Oiri?
Kuita kwemafuta ekupisa: Kupisa Kwekudziya Kwekuita, kugona kwakanaka kwekushisa, kugona kwakanyanya kupisa uye coefficient of thermal conductivity. Nekudaro, mafuta anopisa anozoitika neChain kuputsika pakati peatomiki nemamorekuru, mukomboni uchaora kuitira kuchengetedza yakanyanya tembiricha. Simba rehuscosity, nzvimbo inopenya, yakadai indekisi ichaita chage, zvichikonzera madonhwe eExpress Transfer Efficiency. Saka zvinokurudzirwa makore maviri ega ega chinja mafuta matsva ekupisa.
1. Vhura ndiro yakafukidzwa, waburitsa chinzvimbo chegomba rakavharika, uchishandisa chubhu Batanidza gomba rakavharika rakavhurwa nemafuta ewat.
2. Wobva wasunungura gomba rakabuditswa pachena (zvakare sunungura iro rakatarisana negomba). Rega mafuta akashandiswa abve mudhiramu remafuta.
3. Iyo modhi yemafuta ekudziisa ndeyeMobil 605. Kana uchipisa, wakavhara gomba kune rimwe divi nepo rimwe richichinjisa iyo yepamusoro soro.
4. Mushure mekuzadza mafuta pane dhiramu remafuta zvachose, batidza muchina. Haikwanise kupisa kusvika kune tembiricha yekushanda senguva dzose.
Gadza tembiricha kusvika 50 degree, mushure mekupisa kusvika pamadhigiri makumi mashanu, mira maminetsi makumi maviri.
Wobva waisa temp. kusvika 90 degree, mushure mekupisa kusvika pamadhigirii makumi mapfumbamwe, mira maminetsi makumi maviri.
Wobva waisa 95 degree, mushure mekupisa 95 degree, mira maminetsi makumi matatu.
Wobva waisa iwo 100 degree, mushure mekudziya up 100 degree, mira maminetsi makumi matatu.
Wobva waisa 105 degree, mushure mekupisa 105 degree, mira maminetsi makumi matatu.
Wobva waisa 110 degree, mushure mekudziya 110 degree, mira maminetsi makumi matatu.
Wobva waisa 115 degree, mushure mekupisa 115 degree, mira maminetsi makumi matatu.
Wobva waisa 120 degree, mushure mekudziya up 120 degree, mira maminetsi makumi matatu.
Ipapo inogona kuiisa padhigirii mazana maviri nemakumi mashanu, nekupisa chaiko kusvika pa250 degree.